Nagarik News - कसले रोक्ने, कसले छेक्ने?
सरकारले दुई वर्षअघि नै सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै ऐन जारी गर्‍यो। तर, त्यसको दुई वर्ष बित्दा पनि ऐन लागू गर्ने निकायमा पुगेका र पुनः पुग्नेवाला व्यक्तिहरूले नै त्यसको खिल्ली उडाइरहेका छन्। नीति निर्माण तहमा आफूलाई अब्बल दाबी गर्ने कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले त्यस ऐनको ठाडो उल्लंघनमात्र गरेनन्, सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गरेको दृश्य संकलन गर्ने पत्रकारहरूको सातो नै खाए।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा परिसरमा रिजाल केही दिनअघि चुरोट पिइरहेका थिए। सरकारले जारी गरेको ऐनको हेक्का भएर होला पत्रकारले क्यामेरा सोझ्याइहाले। तर, उनले चुरोट पिउँदासम्म कुनै मतलब गरेनन्। त्यसपछि पत्रकारतिर आएर उनले फर्मान जारी गरे, 'यो तस्बिर र दृश्य प्रयोग नगर्नू।' राम्रो समाचार बनाउने ध्याउन्नमा रहेका पत्रकारले टाउको हल्लाए। पत्रकार पनि उस्तै! हाम्रो देशमा ऐन, कानुन सानालाई मात्र लाग्ने हो भन्ने उनले बुझ्नुपर्ने। 'सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन' भन्ने उखान सुनेकै थिए होलान्।
पार्टी कार्यालयमा मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा संसदीय मामिला मन्त्री हुँदा उनले मन्त्रीको शपथ लिन राष्ट्रपतिभवन शीतल निवास परिसरभित्र नै चुरोट दन्काएका थिए। जहाँ ऐन लागू हुनुपूर्व पनि चुरोट पिउन निषेध गरिएको थियो।
ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्नेलाई एक सय जरिवानाका साथै कैद सजाय पनि हुन्छ। प्रहरीले दुई चार दिन जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम पनि गर्योा, सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खानेलाई पक्रिएर। तर, देशका अगुवा नै यस्तो भएपछि कसको के लाग्छ?
जता मल्को, उता ढल्को
संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्नेमा राष्ट्रपति रामवरण यादव र मन्त्री परिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीचको जुँगाको लडाइँ लामै चल्यो। शनिवार मन्त्री परिषद् अध्यक्ष रेग्मीले बैठक आह्वान गरेसँगै राज्यका सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेका दुवैले त्यस विषयलाई लिएर बाल हठ नै देखाए। तर, संविधानको धारा ६९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार रेग्मीले बैठक आह्वान गरेसँगैे तत्कालका लागि विवाद समाधान भएको छ। संविधानसभाको बैठक माघ ८ गते बस्नेछ। मुलुकले एउटा गति पाएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै छलफल गर्न पनि हुँदैन भन्दै आएको दोस्रो ठूलो दल एमालेका नेताहरू 'तैँ चुप मै चुप' भएका छन्। मुलुकलाई निकास दिने प्रयासमा अन्य दल जुट्दा आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेका एमाले नेताहरू अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै आह्वान भएको बैठकमा समेत सहभागी नहुने हुन् कि?
ओलीको घरमा 'चरी'को गुँड
नेपाल प्रहरीले सत्य र सुरक्षालाई आफ्नो मूल आदर्श बनाएको छ। तर, बेलाबेलामा प्रहरीको त्यो आदर्शले त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई नै गिज्याइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको चरम प्रभावमा पर्ने गरेका प्रहरी अधिकारीहरू बुझेर पनि बुझ पचाउँछन्। यस्तै भइरहेको छ, पछिल्लो समय संगठित अपराधमा सक्रिय दिनेश अधिकारी 'चरी' खोज्ने विषयमा। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरीले चरीको धुइँपत्ताल खोज भइरहेको बताउँदै आएको छ। तर, एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओलीसँग निकट रहेका एमाले धादिङ–१ का क्षेत्रीय अध्यक्षसमेत रहेका चरी ओलीकै संरक्षणमा बस्दै आएका छन्। त्यो पनि उनकै निवास बालकोटमा। तर, प्रहरीले उसलाई फेला पार्न नसकेको जनाउँदै आएको छ। नुनको सोझो गर्ने न हो। प्रहरीको पनि के दोष? बाहिर चरीलाई भेटिएको छैन। ओलीको घरमा चरीले लगाएको गुँड खोज्ने कुरा आएन।
आफ्नो समूहबाट छुट्टिएका धादिङकै अर्का अपराधी राधे भण्डारीलाई खुकुरी हानेपछि चरीले बालकोटमा गुँड लगाएका हुन्। ठमेल र नयाँबजार क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुन्डागर्दीमा सक्रिय चरीलाई राधे भण्डारीको समूहले असार २२ गते गोली हानेको थियो। त्यसको बदलामा चरीले पाँच महिनापछि राधेको खुट्टा र ढाडमा खुकुरीले हानेका थिए। राधेको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ।
उता प्रहरी काम देखाउन चरी निकटका व्यक्ति, उनको घर र जानसक्ने सम्भावित क्षेत्रको निगरानीमा रहेको र कतै नभेटिएको बताउँदै आएको छ। यसअघि पनि चरी गैँडाको खागको कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ पर्दा ओली खुल्ला रूपमा चरीको बचाउमा उत्रिएका थिए। पछि खाग नक्कली भएको भन्दै चरीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो।
रीति न थिति
पार्टीभित्रको बेथितिले आक्रान्त भएका कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले मंगलवार थिति बसाउनुपर्छ भन्दै भाषण दिए। त्यो पनि एउटा पाक्षिक पत्रिकाको लोकार्पणमा। सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सरकार कसरी गठन गर्ने भन्नेमा छलफल र बहसमा जुट्नुपर्ने बेला सबै कुरा छुट्ला जस्तो गरी पत्रिका सार्वजनिक गर्न दियालो फुडल्यान्ड पुगे।
अनि, तीनै जना नेताले भने, 'एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ, गर्छौं।' अघिल्लो संविधानसभामा पनि सहमति हुनै लाग्यो भन्दै दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्षसम्म त्यसै गुजारेका दलका नेताको कुरा कसले पत्याउने? निर्वाचन भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने कांग्रेसमा टुंगो लागेको छैन। गर्नुपर्ने काम नगरेर अन्यत्र भौँतारिएका उनीहरूको चाल हेर्दा एक वर्ष त सरकार बनाउनै लगाउने हुन् कि भन्ने शंका पो उब्जिन थालको छ त। यो तालले कांग्रेसले थिति बसाउला त?